Kuwana Ndima Itsva | Bhuku Regore ra2015
Kuwana Ndima Itsva
Musi weSvondo, 1 April 1945, murume nemudzimai vanonzi Lennart naVirginia Johnson avo vakanga vapedza kudzidza kuGiriyedhi vakasvika muCiudad Trujillo (yava kunzi Santo Domingo), guta guru reDominican Republic. Zvavaiva Zvapupu zvekutanga munyika yacho, vainge vachipinda munyika ine nhoroondo yekukakavadzana uye kurwisana. * Bhuku Regore ra1946 reChirungu rakati, “Iyi indima yainge isati yamboparidzirwa, uye vadzidzi ava vekuGiriyedhi ndivo vaitofanira kutanga kuishanda.” Chimbofungidzira: Maisava nehofisi yebazi, Dzimba dzeUmambo kana ungano. Mamishinari haana waaiziva munyika yacho, aingoziva mashoko mashoma echiSpanish, uye aisava neimba kana midziyo. Vaizoita sei?
“Takaenda kuVictoria Hotel tichinobvunza kuti dzimba dzavo dzaiita marii—vakatiudza kuti $5 pazuva pavanhu vaviri kusanganisira zvokudya,” anoyeuka kudaro Lennart. “Masikati emusi iwoyo chaiwo takatanga chidzidzo chedu cheBhaibheri chekutanga. Izvi ndizvo zvakaitika: Vakadzi vaviri vechiDominican vatakanga tambodzidza navo Bhaibheri kuBrooklyn vainge vatipa mazita ehama dzavo neevamwe vavaizivana navo, uye mumwe wavo ainzi Dr. Green. Patakashanyira Dr. Green, takasanganawo nemuvakidzani wavo Moses Rollins. Pashure pekunge vaziva kuti takawana sei mazita avo nekero, vakabva vanyatsoteerera mashoko eUmambo ndokubvuma kudzidza Bhaibheri. Pasina nguva Moses akava muparidzi weUmambo wekutanga pavagari vemo.”
Mamwe mamishinari mana akasvika mwedzi waJune 1945 uchangotanga, uye pasina nguva akanga atopa vanhu zvinyorwa zvakawanda uye ainge atotanga zvidzidzo zveBhaibheri zvakawanda. Pakazosvika October zvakanga zvava pachena kuti paidiwa nzvimbo yekuitira misangano. Saka mamishinari acho akagadziridza imba yekutandarira neyekudyira paimba yemamishinari kuti vawane nzvimbo yekushandisa seImba yeUmambo. Misangano yacho yaipindwa nevanhu vanosvika 40.
Mumwe wevanhu vakatanga kufarira chokwadi ndiPablo Bruzaud, aizivikanwa nevakawanda saPalé. Aiva maneja wemabhazi aibva kuSantiago achienda kuCiudad Trujillo, saka aigara achienda kuguta guru. Rimwe zuva paaiva muCiudad Trujillo, Palé akataura nezvimwe Zvapupu, ndokupiwa bhuku rinonzi “The Truth Shall Make You Free.” Akatanga kudzidza navo Bhaibheri mazuva ose. Pasina nguva Palé akatanga kuparidza nemamishinari acho uye aivakwidza mabhazi. Pave paya akazosangana naLennart Johnson vakaita rwendo rwokubva kuCiudad Trujillo vakananga kuSantiago, vakapfuura nemumakomo vachienda kuPuerto Plata iri pedyo negungwa. Vaienda kunoona boka revanhu vaifarira avo vakanga vambonyorera kumahofisi edu makuru kuBrooklyn, New York, vachida mamwe mashoko.
Kushanyirwa naHama Knorr naHama Franz
Muna March 1946, Nathan Knorr naFrederick Franz vaibva kumahofisi edu makuru vakashanyira Dominican Republic. Hama dzaitarisira chaizvo kushanya kwavo, uye vamwe vanhu 75 vaifarira chokwadi vakauyawo kuzonzwa hurukuro yaHama Knorr. Pavaiva muDominican Republic, Hama Knorr vakaronga kuti munyika macho muve nehofisi yebazi.
Hama Knorr naHama Franz vari paImba yeUmambo yekutanga, muCiudad Trujillo
Mamishinari akawanda akasvika, uye pakazopera gore rebasa ra1946, munyika yacho mainge mava nevaparidzi 28. Sezvo mashoko akanaka ainge achangotanga kuparidzwa munyika iyi, mamishinari akaita mazuva akawanda achishandisa nguva dzemanheru kuti anyatsodhirowa mepu dzendima yacho kuitira kuti izoparidzirwa zvakarongeka.
Muna 1947, mainge mava nevaparidzi vanopfuura 59 vaiita basa rekuparidza. Mugore iroro, mamwe mamishinari ainge amboshumira kuCuba akaendeswa kuDominican Republic kuti anoshumira ari ikoko. Pakati pawo paiva naRoy naJuanita Brandt. Hama Brandt vakagadzwa semuranda webazi uye vakaramba vachiita basa iroro kwemakore gumi akazotevera.
Pakazopera gore rebasa ra1948, mainge mava nevaparidzi vanenge 110 vaiparidza mashoko akanaka pamwe chete nemamishinari aishingaira. Zvisinei, vaparidzi ivavo vaishingaira vaisaziva kuti nguva dzakaoma zvikuru dzakanga dzava pedyo.
^ ndima 1 Muna 1932, zvinyorwa zveWatch Tower zvainge zvava kusvika kuDominican Republic, asi vanhu vaifarira vakazotanga kudzidziswa Bhaibheri muna 1945, pakasvika Lennart naVirginia Johnson.